Galicia chọrọ iduzi mmepụta nke ume ọhụrụ na Spain | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Tomas Bigordà | | Bayam, Ike ikuku, Ike ikuku, ike hydraulic, Ike imeghari ohuru
Maazị Alberto Núñez Feijóo, onye isi oche nke Xunta kwenyesiri ike na Galicia, "ma eleghị anya ya na Castilla y León", ga-eduzikwa mmepụta nke ume ọhụrụ na afọ ndị na-abịanụ.
N'oge a, gbasara mpaghara ikuku, ụzọ Xunta de Galicia si eche echiche na 2020 na-arụ ọrụ n'akụkụ 4GW nke ike.
Ebumnuche bụ iru 6.000 megawatts n'ime afọ iri na-abịanụ, n'ihi ụlọ ọrụ nke Iwu Mmezu Ego ọhụrụ nyere. Dabere na Xunta, ọ ga-apụta a tupu na mgbe maka ndị niile chọrọ itinye ego na Galicia, n'ọhịa nke mmeghari ohuru kamakwa na ngalaba ndị ọzọ na-eme nke ọma nke akụnụba anyị.
N'ime akwụkwọ akụkọ ndị iwu a na-atụgharị anya, onye isi ala mpaghara ahụ kwusiri ike na ọ na-ewepụta ọnụọgụ iji gosi ọdịiche dị n'etiti ọrụ mmepụta ihe ndị ahụ a na-ahụta mmasị pụrụ iche maka obodo. N'ụzọ dị otú a, a na-anwa ịkwalite agility nhazi na nhazi.
N'eziokwu, ngosiputa ogige iri na asatọ aburula ndi ekwuputala na odi oru nke ihe puru iche, nke nke 12 nwere ikike ugbu a. Na njedebe, ihe anyị chọrọ ka ụlọ ọrụ nzọ na Galicia, gbakwunyere onye isi ala mpaghara, na mgbakwunye na ịkọwa nke ahụ Ike imeghari ohuru ha na-enye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 90% nke ọkụ eletrik ndị Galicians riri, ebe ha na-anọchite 4,3% nke GDP mpaghara.
Ihe ohuru nke Iwu Azụmaahịa webatara bụ imepụta October gara aga nke ndekọ ifufe nke Galician, ebe edere arịrịọ maka igbu 1,126 megawatts.
0.1 Ugbo ikuku Malpica
1 Mee ka ume ndị ọzọ dị ọhụrụ
1.1 Biomass agbam ume Strategy
2 Igwe mmiri
3 Were uru nke Geothermal
Ugbo ikuku Malpica
Maazị Feijoo, jiri ohere nleta ya tinye Malpica ifufe ugbo dị ka ihe atụ nke ọrụ nke gụnyere "ntinye aka atọ": gburugburu ebe obibi, nke ime obodo - ebe ọ na-enye ohere ịmepụta ọrụ na kansụl ógbè - na, n'ikpeazụ, na-akwado gọọmentị. nkwa maka mmeghari ohuru, bụ ogige nke abụọ ka enyere ikike na mpaghara ahụ.
Mee ka ume ndị ọzọ dị ọhụrụ
Ọbụghị naanị na ike ikuku dị mkpa, Xunta ahụ na-agba mbọ ịkwalite ike ndị ọzọ. N'ezie, na Galicia enwere oke mmiri ozuzo dị elu yana, ya mere, ike anyanwụ adịghị arụ ọrụ nke ọma, ọ gosipụtara atụmatụ iji meziwanye ike biomass. Nsonaazụ nke itule bụ nke ahụ Ka ọ na-erule ngwụsị nke afọ 2017, a ga-akwado ịwụnye ihe karịrị igwe eji esi mmiri ọkụ 4.000 na ụlọ.
Biomass agbam ume Strategy
Na usoro mmefu ego nke 3,3 nde euro, Xunta de Galicia chọrọ ịkwalite ntinye nke ndị na-agba mmiri biomass iji kwalite mmepụta nke ume ọhụrụ ma belata ihe ọkụkụ na-emepụta gas na ihe karịrị 200 ọha na eze, ndị otu na-enweghị uru na ụlọ ọrụ Galician.
A na-eme atụmatụ na uru nchekwa nke ndị niile na-erite uru na Strategy a ga-enweta ruru nde euro 3,2 na ụgwọ ume kwa afọ, ewezuga nde mmanụ mmanụ dizel 8. Nke a ga - enyere aka na mbelata tọn 24000 tọn CO2 na ikuku.
Iberdrola dechara afọ gara aga mgbasa nke nnukwu hydroelectric mgbagwoju na Galicia, mgbe enyechara ọrụ ọhụrụ San Pedro II osisi, eguzobe site n'aka onyeisi ụlọ ọrụ ọkụ eletrik, Ignacio Galán, na onye isi ala nke Xunta de Galicia, na Sil Basin, na Nogueira de Ramuín (Ourense).
Nye ọrụ nke ụlọ ọrụ a gụnyere mgbasa nke Santo Estevo-San Pedro hydroelectric complex, rụrụ kemgbe 2008 na nke dị nso 200 nde ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 800 ka e nyeworo ha ọrụ.
Were uru nke Geothermal
Ala Galician bara ọgaranya, ọ na-ewepụta ụdị ahịhịa na ọdịdị ala pụrụ iche, mana ala ala dịkwa iche iche maka ịchekwa akụ na ụba, n'ọtụtụ n'ime egbughị oge. Na mgbakwunye na ike nke okpomọkụ, anyị ga-agbakwunye akụ na ụba nke ala.
Dị ka ọtụtụ ọmụmụ si kwuo, Galicia nwere ike iduzi ya mgbanwe ohuru na ojiji nke ike geothermal, ọ bụghị naanị dị ka isi iyi nke okpomọkụ kamakwa dị ka isi iyi nke ọkụ eletrik.
Taa Galician geothermal abụrụlarị onye ndu mba. Dabere na data sitere na Acluxega (Association nke Xeotermia Cluster nke Galicia), obodo dị na 2017, ọnụ ọgụgụ nke usoro 1100 nke ikuku ikuku geothermal na mgbapụta ọkụ. Nke a na ọnụ ọgụgụ, obere ma ọ bụrụ na anyị na-atụnyere ya isi mba nke European, ma a na-eduga ọnụ ọgụgụ na Spanish larịị.
Banyere ike ngụkọta arụnyere thermal, e mere atụmatụ na na ngwụcha afọ 2016 na Galicia, ọnụ ọgụgụ nke ihe ruru megawatt 26 ruru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Galicia chọrọ iduzi mmepụta nke ume ọhụrụ na Spain
Pamplona ga-akwado inye onwe ya nri maka ụlọ obibi